Featured Blog Posts – August 2014 Archive (5)
गाउँको आँगनबाट डिस्कोमा छिरेको तीज
केहि दिन अगाडि म चितवनको एउटा नाम चलेको होटलमा पुगेको थिए। दश/बाह्र दिनदेखि काम विशेषले कुनै न कुनै होटलमा पुग्नु परेको छ । संयोग भनौँ वा दुर्भाग्य म जुन होटलमा पुग्ने गरेको छु, त्यहाँका हलहरु पूरै हाउस फूल भएको देखेको छु । म ती होटलहरुमा संघ संस्थाहरुबाट निमन्त्रणा आएका कारण त्यहाँ पुगेको हुन्छु, होटलमा पुग्दा त्यहाँको तामझाम देखेर टक्क अडिन्छु र एकछिन घोत्लिएर सोच्न थाल्दछु । …
Added by आनन्द पोखरेल on August 28, 2014 at 2:00pm — 1 Comment
एक दिन अचानक पुरानो साथीलाई भेट्न उसको घर गएको थिए। मेरो एकदम मिल्ने तर निकै भएको थियो नभेटेको उसलाई ।
उसको स्वभाव अलिक चन्चले खालको, जहिले नि रमाइलो गर्ने खालको थियो ।
म उसको घर पुग्दा ऊ आफ्नो कोठामा मोबाइल खेलाउदै बसिरहेको थियो। म गएपछि के छ, सन्चो बिसन्चोको बारेमा सोध खोज भयो । हामी दुईबीच नयाँ नौलो घटनाक्रमको बारेमा सोधपुछ भयो । तर, मलाई यस्तो लाग्यो कि उसमा केही गडबडी भएको छ। किनकी ऊ पहिले जस्तो…
Added by Nishan Rai on August 28, 2014 at 10:30am — No Comments
Added by sangharsha panta on August 26, 2014 at 4:30pm —2Comments
तिज किन मनाईन्छ ? - थाहा छैन ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुलाई
हिन्दु नेपाली महिलाहरुको महान पर्ब हरितालीका तिजको चहलपल यतिबेला गाँउदेखि शहरसम्म लहरै फैलीएको छ । साँझपरेपछि गाउँघरका महिला दिदीबहिनी पनि जम्मा भएर तिजका गितमा रमाउदैछन । तर देशैभरी तिजको चहलपहल बढिरहेको बेला अछामका ग्रामिण क्षेत्रमा भने के हो तिज थाहा छैन । ऋषिदह लगायतका विभिन्न ठाँउमा अझै जानकारी छैन तिज किन मनाईन्छ ?कसरी मनाईन्छ ? उल्टै प्रश्न गर्छन त्यहाँका दिदीबहिनीहरु ।
अछामको सदरमुकाम मंगलसेन अनी प्रमुख ब्यापारी केन्द्र…
Added by indrasara khadka on August 6, 2014 at 1:00pm — No Comments
भ्रष्टाचारीलाई छोरी नदिउँ
भ्रष्ट आचारण नैं वा बिग्रेको मति नैं भ्रष्टाचार हो । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि सार्बजनिक पद वा सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । भ्रष्टाचारीले अरु काम केही नपाए समुन्द्रको छाल नैं गनेर भएपनि भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने जनबिश्वास रहेकोछ भने भ्रष्टाचारीलाई पौरखी मानेर नाता जोड्नेहरुको पनि यहाँ कमि छैन ।
भ्रष्टाचारले कानुनी शासन र लोकतान्त्र्रिक राज्यको उपहास गर्दछ । यसले सनै सनै समाज र राष्ट्रलाई खोक्रो बनाउँछ । भ्रष्टाचार बढ्दै गएमा देशको अर्थतन्त्र चौपट हुन्छ, बिकास अबरुद्ध…
Added by Namaskar Shah on August 5, 2014 at 12:00am — No Comments